प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वार्ता – भ्रमण अत्यन्त सफल र सार्थक भयो « Himal Post | Online News Revolution
प्रकाशित मिति : २०७६, ३० बैशाख ०८:११
प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो पाँच दिने भियतनाम भ्रमण सकी सोमबार बिहान कम्बोडियाका लागि प्रस्थान गरेका छन्। भियतनामका प्रधानमन्त्री न्गुएन सुआन फुकको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली यही वैशाख २६ गते भियतनाम पुगेका थिए।
भियतनाममा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले भारत-नेपाल व्यवसायी मञ्च, हो चि मिन्ह एकेडेमी अफ पोलिटिक्स र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वैशाख दिवसलाई सम्बोधन गरेका थिए।
आफ्नो भियतनाम भ्रमण सफल रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी गरेका छन्।
भियतनाम भ्रमणबारे रासस प्रतिनिधि दीपेन्द्र अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गरेका छन्–
यो भ्रमण अत्यन्तै सफल र फलदायी रह्यो। यसका दुई पाटा थिएः पहिलो औपचारिक पाटो सरकारको तर्फबाट र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध जयन्तीका अवसरमा ११२ राष्ट्रका प्रतिनिधिबीच बुद्धको जन्मस्थलको प्रतिनिधिको हैसियतले बुद्धका विचार, आदर्श र आजको दिनमा त्यसको सान्दर्भिकताको बारेमा विश्वसमुदायलाई जानकारी दिनु, यी दुवै सन्दर्भबाट यो भ्रमण सफल र सार्थक रह्यो।
यो भ्रमणले अब नेपाल र भियतनामबीच कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन कतिको सफल र सहज पार्ला ?
हो, नेपाल र भियतनाम लामो समयदेखिका मित्रहरू हुन् जसको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको करिब चार दशक भएको छ तर प्रधानमन्त्रीको स्तरमा यो मेरो भ्रमण पहिलो हो। यस सिलसिलामा विभिन्न पक्षसँग घनिभूत छलफल भएका छन्। अब हाम्रो कूटनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र अन्य बहुपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ र सुमधुर हुन्छ। व्यापार विस्तार हुन्छ। नेपाली उत्पादनको निर्यात बढ्छ। करीब दश करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा नेपाली उत्पादनको निर्यात बढाउनुपर्छ। यो भ्रमणबाट ती काम हुन्छन्।
यहाँले विश्वसमुदायसँग आगामी वर्ष वैशाख दिवसको कार्यक्रम नेपालको लुम्बिनीमा गर्ने उद्घोष गर्नुभएको छ, त्यसको तयारी के छ ?
यी सम्झौता छिट्टै कार्यान्वयनमा आउँछन्। यसका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्र बनेको छ यसले आजैबाट काम सुरु गरेको छ।